Kooxda sheegata beesha caalamka ma rabto in doorasho dhacdo maxaa xala? - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kooxda sheegata beesha caalamka ma rabto in doorasho dhacdo maxaa xala?
Kooxda sheegata beesha caalamka ma rabto in dalka doorasho ka dhacdo marka waxaad is weydiin kartaa maxaa xala sideese ay rabtaa inay ku hesho caade qaate iyaga u shaqeeya.
Waxa dhamaanba ay diideen xataa wixii iyagu gacantooda ay ku qorteen, waxay is lahaayeen qalqal geliya oo dhaha waxa dhamaaday xilligii dawlada ayadoo xilli hore la sheegay in dawlada ay bedeli karto dawlad kale.
”Xataa ma akhriyaan dastuurka gaaladu dhodhoobtey ee dalka u yaala ee markay doonaan ku faanaan yiraahaana federaalkii ayaa lagu xadgudbey ayuu yiri Cali Calasow. Madaxda hadda joogta iyo barlamaankuba diyaar waxay u yihiin inay sii joogaan haddayna rabin in dalka doorasho ka dhacdo.
Haddaba maxaa xala marhadday xataa ka soo hadlayaan qaramada midoobey
Dawladu waxay ku qasban tahay inay doorashada dhigto oo ku qabato dhamaan meelihii loo asteeyay kadibna ay aragto cida rasaasta ku soo furta ayuu qabaa Xuseen Warsame wax kale oo hadda u hadhay ma jiraan.
Haddii dawladu ay taas ka maagto waxa qasaba in dalku doorasho aado ileyn u caga-duubnaan maayaan dabadhilifyada u shaqeeya kooxda sheegata beesha caalamka ee Kiiniya ugu horeyso kuna xigaan Ingiriiska iyo Maraykanka. Waana in loo dareero mid qof iyo coda xilliga ay noqotaba.
”Waxa dawlada laga sugayaa haddaba in labadaa miduun ku dhawaaqdo ayuu ku daray Cali Calasow. Waxa daba-dhilifyadu sugayaan inay u yeertaan kooxda sheegata beesha caalamka waana halka ay awalba rabeen.
Waxase dawlada ka go’an inaan gaalo faraha la soo gelin arimaha siyaasada Somaliya ee dibedda ka qasaan si qarsoodiya inta la ogaanayo.